Hlola eLos Angeles, Usa - World Tourism Portal
Hlola eLos Angeles, Usa
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eLos Angeles
Bukela ividiyo ekhuluma ngeLos Angeles
Idolobha laseLos Angeles (elaziwa nangokuthi i-LA, futhi elibizwa ngokuthi "Idolobha Lezingilosi") lingumuzi onabantu abaningi eCalifornia. Itholakala esisekelweni esibanzi eSouthern California, leli dolobha lizungezwe izintaba ezinkulu, izigodi, amahlathi, amabhishi amahle eceleni koLwandlekazi iPacific, nehlane eliseduze. Ingabe idolobha elikhulu elinokubona okuningana, izindawo zokudlela, ukudla kwasebusuku nezindawo zokuhlala - zibheke ngamunye wabo
Indawo yedolobha elikhulu lesibili ngobuningi e-United States futhi inabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-17 abaduma kuzo zonke izingxenye zomhlaba.
Hlola iLos Angeles okuyisikhungo esibalulekile sesiko, umuthi, ezolimo, ibhizinisi, ezezimali, amandla, i-aerospace, isayensi, ukucubungula ukudla, abezindaba, ukuhweba kwamanye amazwe kanye nezokuvakasha. Abavakashi bamazwe aphesheya babheka iLos Angeles njengeyaziwa kakhulu nge- “Hollywood,” kodwa umkhuba oqhubeka njalo wokukhipha umsebenzi wokukhiqizwa kwamafilimu nethelevishini uyehlisa isithunzi kulo mkhakha waze lapho ukuzijabulisa nabezindaba kuqasha khona ngabantu abango-120,000 kuphela kuyo yonke indawo kamasipala. (futhi iningi labo lisebenza eBurbank noma eCulver City, hhayi iHollywood). I-LA ihlala iyisikhungo esikhulu sokukhiqiza imibukiso yethelevishini nezentengiso zethelevishini, kanye nokuqoshwa komculo.
Kulezi zinsuku, umnotho waseSouthern California uqhutshwa eminye imikhakha yawo: izindawo zokucoca uwoyela ezinkulu, izinkulungwane zezimboni zemvelo nezindawo zokulungisa ukudla, namachweba awo amatasa nezikhumulo zezindiza, ngomphumela wokuthi isifunda sase-US Customs esimboza lesi sifunda ematasa kakhulu e-United States.
Isifunda sebhizinisi eliphakathi nendawo nasekhaya kuya kumgwaqo wamasiko we-Grand Avenue. Ukufika kwezimoto nemigwaqo enguthelawayeka kuholele ekunciphiseni komakhelwane, kepha kubonakale imvuselelo ekhuphukayo eminyakeni yamuva, eholwa izakhiwo ezintsha zokuhlala, enamahhotela athokomele, imigoqo, izitolo nezindawo zokudlela.
Indawo yobumnandi esenyakatho yedolobha nasempumalanga yeHollywood ngokushesha enomusa.
Ikhaya lesikhumulo esikhulu kunazo zonke olwandle e-US nendawo yokuqalisa uhambo lokuya eCatalina Island.
Ingxenye edume kakhulu yedolobha, nendawo lapho kwenziwa khona ama-movie (noma ukunemba,). Ithole ukwedlula konke eminyakeni yamuva, okubangelwe ukwakhiwa kweHollywood & Highland kanye nokubuya kwama-Academy Awards.
Ingxenye esenyakatho yedolobha laseLos Angeles, ilele esigodini enyakatho ntshonalanga yedolobha, equkethe izifunda ezahlukahlukene, futhi iningi elihlala kulo.
Kudala waba nedumela lodlame lwamaqembu ezigilamkhuba futhi waziwa ngezidubedube zeRodney King. Kepha yize isasala kakhulu kuma-radar abantu, kunezinto okufanele zibone, njengamamnyuziyamu wase-Exposition Park, njengoba le ndawo izama kancane kancane ukulungisa isithombe sayo esilimele.
Uhlangothi lwase Ntshonalanga
Imigwaqo ejwayelekile ethe xaxa phakathi komkhawulo wedolobha ephakathi kwedolobha laseLos Angeles nolwandle. Inezindawo zokudlela eziningi ze-upscale, izindawo zokuthenga ezinkulu, nezinkundla zemidlalo yama-movie.
Ikhaya lokwakhiwa komlando kwesifunda iMiracle Mile, iMakethe yoMlimi kanye nezindawo zokuthenga i-Los Angeles County Museum of Art, Koreatown, i-CBS Television City, kanye neLa Brea Tar Pits.
Indawo yedolobha laseLos Angeles ibilokhu “iyindawo eqhubekile phambili” selokhu kwaqedwa ujantshi ohamba ngezinyawo e-1876, yaqala ukuheha abanye abantu abavela eMiddlewest nase-East Coast benobusika obufudumele, baba isango lokwehlukahlukana okumangalisayo kwabantu abavela kulo lonke iPacific IRim neLatin America.
Yize ukucwazimula okwenzeka manje eLos Angeles kuyinto entsha, umlando wale ndawo uqalwa okungenani kwe-3,000 BC, njengoba amarekhodi asendulo abonisa ukuthi le ndawo ngaleso sikhathi kwakuhlala abantu bomdabu abazingela izilwane ezincelisayo zasolwandle futhi baqoqe imbewu yokudla, bese kuthi abantu abayimisuka okuthiwa yiTongva.
ILos Angeles ingelinye lamadolobha ahlukahlukane kunazo zonke esizweni futhi ngenxa yalokho umhlaba ngokwezinhlanga zawo kanye nokuma komnotho.
Ingxenye yesithathu yabantu abahlala kuleli dolobha abazalelwa kwamanye amazwe. Abantu baseLos Angeles bavela kuwo wonke umhlaba futhi bahlakazeka kulo lonke leli dolobha elihlangene, eliyingqayizivele, yize iningi labo lihlangana ezindaweni ezinobuzwe njengeLittle Armenia, Koreatown, Little Ethiopia, Chinatown, Little Tokyo, Historic Filipinotown noma iTehrangeles.
Ukuhlukahluka kwaleli dolobha kwenza iLos Angeles ingelinye lamadolobha amakhulu omhlaba, eliqhakaza ngamathuba amasiko aqhamuka kuwo wonke amagumbi omhlaba. Ukuhambela izindawo ezihlala abantu ngokwezinhlanga ngokuvamile kuyindlela elula yokuzwa umehluko wesiko okhona kulo lonke leli dolobha futhi ujabulele ukuphendulwa kwezinhlanga okuyiqiniso. ILos Angeles inezinye zokudlela ezinhle kakhulu emhlabeni, futhi sibonga inani labantu asebekhulile bokufakelwa, eziningi zezindawo ezingcono kakhulu ezishibhile kepha ezibukekayo ezisezindongeni ezihambisana nanoma yisiphi isabelomali. Yize iLos Angeles mhlawumbe idume kakhulu ezimbonini zayo zokuzijabulisa ezikhulayo, amasiko amaningi kungaba yingxenye ebaluleke kakhulu yesiko lesimanje le-Angeleno.
Isimo sezulu saseLos Angeles sihlukaniswa njenge-subtropical-Mediterranean, okuyisimo sezulu esingandile futhi esivame ukufiswa. Idolobhana lilanga eliningi unyaka nonyaka.
IsiNgisi yilona limi oluvelele eLos Angeles. Kodwa-ke, njengokuningi kweCalifornia nayo yonke izwe laseMelika elilinganisayo Mexico, ISpanishi futhi sikhulunywa kabanzi. Ngisho negama likaLos Angeles liyigama laseSpain elisho ukuthi “Izingelosi.”
Indawo yaseLos Angeles ihanjiswa yizikhumulo zezindiza ezinkulu ezinhlanu nezikhungo zezindiza ezingaphezulu kweshumi nambili. Izikhungo zezindiza ezinkulu ezinhlanu zitholakala eLos Angeles, Burbank, Santa Ana, Long Beach nase-Ontario.
Cishe bonke abavakashi bokuqala be-LA bazofuna ukuvakashela iHollywood, i-Universal City (ikakhulukazi i-Universal Studios), neVenice Beach njengezinto eziza kuqala kubo ngaphakathi eDolobheni laseLos Angeles uqobo. ICentury City, iDowntown Los Angeles, UCLA, USC, Griffith Park kanye namabhuloho eLos Angeles River asempumalanga yedolobha nakho konke kuyabukeka. Konke kusetshenziselwe ukuqopha inamba enkulu yama-movie adumile, izinhlelo zethelevishini, nezentengiso zethelevishini, futhi kuzobonakala kuncane ukusiqonda ngalesosizathu.
Kodwa-ke, ezinye izimpawu eziningi ezihlotshaniswa ne-LA ngobuchwepheshe azitholakali eDolobheni laseLos Angeles, kodwa zisedolobheni eliseduze noma ezindaweni ezingahambelani. Isibonelo, iRodeo Drive itholakala eBeverly Hills; iSanta Monica Pier, iStreet Street Promenade, neSanta Monica Beach kuseSanta Monica; Izikhungo ze-studio ze-NBC, iDisney, neWarner Bros. zonke zitholakala eBurbank; isitudiyo sakwaSony Pictures Entertainment siseCulver City; neMarina del Rey yindawo engenakuhlanganiswa ngaphansi komthetho wedolobha. UMalibu ucishe uhhafu wehora lokushayela ngasentshonalanga kweSanta Monica. IDisneyland, iNewport Beach, neSouth Coast Plaza konke kutholakala ngaphezulu kwehora lokuya ngaseningizimu mpumalanga e-Orange County.
U-Olvera Street uyisikhungo esingumlando se-LA, futhi leli dolobha lithola igama laso pueblo yaseSpain-Mexico esungulwe lapha kuma-1780s njengeNuestra Señora la Reina de Los Ángeles, noma i-Lady Yethu iNdlovukazi Yezingilosi. Isakhiwo esidala kakhulu edolobheni sikhona lapha futhi sivulekele izivakashi, njengoba kunendawo yokudlela yaseMexico nezitolo eziningi ezihlinzeka izivakashi. Njengendawo yakudala edolobheni, umgwaqo uyingxenye yesikhumbuzo esikhulu se-El Pueblo de Los Angeles esibambe izakhiwo eziningi ezigcinwe kusukela nge-18th ne-19th century.
Kukhona ezinye izindawo ezimbili ezibalulekile zomlando eLos Angeles County ezilondoloze ifa leSpain lesifunda. Kukhona iMishini iSan Gabriel Arcangel e-Alhambra yanamuhla naseMishini uSan Fernando Rey de España eSan Fernando Valley, zombili izindlela zokugcina zemishini yaseSpain ezazibusa lesi sifunda ngesikhathi sangaphambi kokuhlala kwaso eYurophu.
Izindawo ezingaphansi kwabavakashi eNortheast LA zibamba futhi imibukiso eminingana ngempilo yasekuqaleni eLos Angeles yanamuhla ekuqaleni kwekhulu le-20th. IGugu Heritage Museum liyimnyuziyamu evulekile futhi umbukiso wezakhiwo ezingumlando endaweni yaseMontecito Heights, elandisa ngentuthuko kanye nomlando weSouthern California usebenzisa izibonelo ezigciniwe zezindawo zokwakha zasendaweni. Abaqondisi bezokuvakasha abazinikele bathatha izivakashi kule ndawo, bexoxa ngomlando wesifunda, amasiko kanye, nokwakhiwa kwezakhiwo. Ikhaya leLummis eliseduze liyindawo yokusungula yezandla yaseMelika yekhulu le-19th eyakhiwa nguCharles Fletcher Lummis, amatshe alo omfula wedwala abonakala ngokushesha ekwakhiweni okuhlukile kweLos Angeles yezindawo ezizungezile. Ikhaya le-mraba le-4,000 lesikwele liyisikhumbuzo sesikhumbuzo saseLos Angeles esivulekile emphakathini.
Indawo eyiMiracle Mile eduze kweWilshire Boulevard entshonalanga yedolobha ingenye yezindawo zomlando wedolobha. Ubuningi bokwakhiwa kwale ndawo busha kakhulu kune-Historic Core, futhi buhlotshiswe ngezakhiwo ezenziwe emphakathini we-Art Deco ne-Streamline Moderne yaphakathi ne-20th century. Le ndawo inemvelaphi yayo kuma-1920s njengenye yezifunda zokuqala zokuthenga ezinamathela ekusakazweni kwendawo engaphansi komhlaba.
Ekugcineni, emlandweni omncane wasendulo odlula ngisho nasezindaweni ezihlala abantu boMdabu baseMelika eLos Angeles, izivakashi zingavakashela eLa Brea Tar Pits edumile entshonalanga neMiracle Mile, okuyindawo lapho intela iye yadlula khona emhlabeni izinkulungwane zeminyaka, ibamba futhi ilondoloze izinsalela zezilwane eziningi. Imnyuziyamu yekhasi inezinsalela eziningi ezitholakele lapho ziboniswa khona.
Iminyuziyamu - imidwebo eLos Angeles
Amapaki eLos Angeles
imininingwane yohambo lwabo
I-Big Lebowski Tour- Lolu hambo luzokuthatha ngokufaka izindawo zokuthwebula ifilimu i-The Big Lebowski futhi luzohlanganisa lonke iLos Angeles nezindawo ezizungezile.
Yize i-LA ilikhaya kosaziwayo abaningi be-A-list, ngenxa kasayizi omkhulu wedolobha cishe akunakuphikiswa ukuthi ungene kunoma yikuphi lapho uvakasha. Uma ufuna ukubona usaziwayo ngamehlo akho ngesikhathi uhambela, kuzofanela uthole ukuthi uzohambela kanjani umcimbi omkhulu lapho osaziwayo bevame ukubakhona njengekhonsathi, umdlalo wokudlala, umculo, ukuqoshwa kombukiso wethelevishini, indumezulu yefilimu, imiklomelo umcimbi, umhlangano, njll. Noma kunjalo, ngaphandle kokuthi ube nenhlanhla ngokwanele yokuthola ukuthi usesimweni lapho usaziwayo enikeza ngokuzithandela ama-autographs noma efaka abalandeli bezithombe, kufanele uqhubeke uqonde kude noma ubeke engcupheni yokuhlasela kweCalifornia's anti eqinile. Ukulandela imithetho.
Edolobheni elihlakazeka njengeLos Angeles, kunenqwaba yezindawo zamakhonsathi. Noma ngabe ufuna ukubona okusondelene kwegumbi, i-orchestra enkulu noma idwala lakamuva ikhonsathi eLos Angeles, kunendawo nohlelo lomsindo lwawo wonke umuntu.
Imicimbi Ekhethekile eLos Angeles
Yini ongayithenga eLos Angeles
Ukuthi udlani futhi uphuze eLos Angeles
Amakhofi e-Intanethi asatshalaliswa edolobhaneni futhi atholakala kalula ezindaweni eziphezulu zabavakashi njengeHollywood Blvd neMelrose Ave. Kubahambi abaningi, ukuma esitolo sekhofi sendawo njenge-Starbucks noma i-The Bean Bean kufanele. Ezinye izindawo zingahle zibe nesevisi yamahhala yamakhasimende noma zidinga imali yokusebenzisa. Amahhotela amaningi abiza kakhulu nezimoto zokuhambahamba nazo anikezela ngokufinyelela okuku-inthanethi okuvumelanayo, okuvame ukusebenziseka ezindlini zokuphekela ngaphambi kokungena.
Ukuqaliswa kokudla okusheshayo kwasendaweni kanye nezindawo zokudlela ezithile (isib. McDonald's) kunganikeza i-Wi-Fi yokuncoma, njengoba kwenza nezitolo ezifana neTarget, JC Penney, neVons. Uhlelo lweLabhulali Yomphakathi yaseLos Angeles lunikeza ukufinyelela kwe-Wi-Fi emagatsheni ayo amaningi ngaphandle kwesidingo sekhadi lomtapo wolwazi.
Kufanelekile futhi ukubheka amanethiwekhi womphakathi we-Wi-Fi mahhala (isib. EGriffiths Observatory).
Ibhishi laseSanta Monica
ISan Fernando Valley - “ISigodi” yisifunda esenyakatho nedolobha, kanye namadolobha azimele anjengeGlendale neBurbank.IsiGodi siyikhaya le-Universal Studios, i-NBC Studios, i-CBS Studio Center, iWalt Disney neWarner Brothers Studios.
I-West Side - I-West Side yeLos Angeles iyikhaya lemiphakathi eminingi ephezulu efana neBel-Air, Brentwood, nePacific Palisades, kanye namadolobha azimele eWest Hollywood, iBeverly Hills, neSanta Monica.
I-Orange County - imiphakathi eminingi ephezulu, eminye ngasolwandle, eningizimu-mpumalanga yeLos Angeles. Ikhaya le-Disneyland phakathi kwezinye ezikhangayo.
UMalibu - enyakatho yeSanta Monica, endaweni engaphansi kwehora elilodwa ukusuka e-LA kuPacific Coast Highway (PCH). Idume ngamabhishi amahle, izintaba nama-wineries.
I-Palm Springs - idolobha eliyindawo yokuhlala esifundeni esogwadule saseSouthern California enikeza inhlanganisela ephelele yemisebenzi yangaphandle nokuphumula okuvamile. Cishe i-2h drive kusuka ku-LA
ISan Diego - enye indawo enkulu yedolobha elikhulu eSouthern California, cishe i-2 ukuya kwi-3 ihora lokushayela ngaseningizimu yeLos Angeles (ngokuya ngethrafikhi).
Las Vegas - indawo enkulu yedolobha elikhulu e-Mojave Desert, cishe i-4 1 / 2 ihora drive enyakatho-mpumalanga yeLos Angeles. Kuyaziwa ngemibukiso yayo yosaziwayo, amakhasino, ukuyothenga kanye nezindawo zokudlela.
I-Baja California - noma ngabe ukubona amandla aphezulu eTijuana, idolobha lolwandle laseRosarito, noma iwayini lendawo elikhazimulayo edolobheni letheku lase-Ensenada, injabulo yaseMexico imane nje kuyindlela yokuhamba ngehora le-3.